Nepali Sex Stories: September 2012
Posted by sexjob at 12:56 AM 10 comments:
अनि मैले उठायको त, एउटा मधुर र सानो स्वरमा कोइ केटि बोलेको आवाज मेरो कानमा गुन्जियो, म त झसङ्ग भएँ र एकछिन त मेरो मुखबाट आवाज नै निस्केन । त्यसपछि मैले नम्र भएर सोधें, "को बोल्नु भएको होला"; उनले भनिन, "यो संजना अन्टिको नुम्बर होइन", हो तपाई को बोल्नुभएको, मैले भनें अनि "म सोस्थिका बोलेको अनि के घरमा संजना आन्टी हुनुहुन्छ "-उनि; "हुनुहुन्छ दिने हो ?"-म; "हजुर दिनुहोस्न"-उनि; "अनि मैले सोस्थिकाले हजुरलाई फोन गरेको छ भनि आन्टीलाई बोलाएँ"; आन्टी-'किचेनमा लिएर आऊ त"; मैले आन्टीलाई फोन दिएर फेरी टिभि कोठामा आएँ, केहि समाए पछि मलाई आन्टीले "रोजित किचेनमा आऊ त" भनि बोलाउनु भयो । अनि म किचेनमा गएको त आन्टीले मलाई सोस्थिकलाई लिएर आउन मात्र के भन्नुभयको थियो, म मनमनै हर्सित हुदै भने कहाँ नि? "कलंकीमा- कलंकी च्वोकमा क्या"-आन्टीले भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनि कपडा चेन्ज गरेर कलंकीतिर लागें ।
कलंकी च्वोकमा धेरै समान क साथ एउटी परी जस्ती केटि उभिएर बसिरहेकी थि। मैले मनमनै सोचें सायद उही हुनुपर्छ भनि तेस केटि भए ठाउँमा गएर सोधें तिमि......सोस्थिका......संजना आन्तिको......झापाबाट आएकी......Yeah!... "हजुर"-उनले भनिन; समान धेरै भएको हुनाले मैले एउटा ट्याक्सी बोलाएर सबै समान ट्याक्सीमा हाल्न लगाएँ अनि हामी दुवै जना ट्याक्सीमा चढेयौ। उनि केहि पनि नबोली बसिरहिन्, त्यसैले मैले नै बोल्न सुरु गरें, "तिमि काठमाडौँ के गर्न आएकी?"; "पढ्न"-उनले भनिन; "पढ्न?"...मैले भने...के पढ्न नि?"; उनले जवाफ दिइन् "+२ Science"; "के तेसो भए तिमि यस्.यल.सी. परिछ्या सकेर आएकी हौली होइन?"; "हो"...सोस्थिका; अनि मैले भने के तिमि एस् भन्दा अघि पनि काठमाडौँ आयकि थियौ?; "नै- यो नै पहिलो पटक हो"-सोस्थिका ।
यस्तै-यस्तै मिठा-मिठा कुराहरु गर्दागर्दै आन्टीको घरमा आइसकेको रहेछौं, समय बितेको नै पत्तो भएन। ट्याक्सीबाट समान झरेर ड्राईभरलाई भाडा दिई हामी भित्र गयौं । "ओहो नानु ता यत्री ठुली भइछौ"-नभेटेको त धेरै पो भएछ हघि'-आन्टीले भन्नुभयो; फेरी आन्टीले "ममी सन्चै हुनुन्छ त नानु ?'; सोस्थिका-"हजुर"; आन्टी-बाटोमा केहि त भएन नि होइन ?नाई केहि पनि भएन तर भोमिट चाँही धेरै भयो"- सोस्थिका । आन्टी -जाऊ कोठामा आराम गर म Breakfast तयार गर्छु; "हवस्"-सोस्थिका अआन्टी- रोजित सोस्थिकलाई Guest Room मा लैजाऊ त एकछिन आराम गर्छिन। मैले हुन्छ भने अनि आन्टी किचेनतिर लाग्नु भयो र हामी कोठातिर ।
"य हजुरको नाम रोजित हो?"-सोस्थिका; मैले मुन्टो हल्लाएर हो भनें कोठामा म एउटा सोफामा बसें भनें उनि अर्कोमा । हामी टिभि हेरिरहेका थियौं, सोस्थिकाले भनिन, "Toilet कहाँ छ ?" फ्रेश हुन हो मैले भनें तर उनले होइन पिसाब फेर्न। "ये......बाहिर दायाँ साइडमा छ" सोस्थिका Toilet गईन् । आन्टीले Breakfast लिएर आउनु भयो । सोस्थिका खोइ त? -आन्टी Toilet गएकी छिन्, मैले भने सोस्थिका पनि आइन् अनि हामीलाई Breakfast खान भनेर फेरी किचेनतिर लाग्नुभयो आन्टी। हामी Breakfast खादै टिभि हेर्न थालौं । तिम्रो यस्.यल.सी. परिछ्या कस्तो भयो त ?- मैले भनें; सोस्थिका-राम्रो भयो; हामी यस्तै कुरा गर्दै थियौं आन्टीले खाना खाना बोलाउनु भयो अनि हामी दुवै खाना खान किचेनतिर लागौं ।
हामी फेरी टिभि हेर्न थाल्यौं । टिभि हेर्दा मैले भनें सोस्थिका घुम्न जाने हो ?थकाई लागेको छ भोलि घुमौंला नि सोस्थिकाले भनिन् । Ok...म...मेरो exam आएको छ म पढ्छु तिमि रेस्ट गर्नु ल । सोस्थिका- "हस्" अनि हजुर कति class मा हो ? १२ मा हो भनि म पढ्न थालें, उनि चाँही टिभि हेरिरहिन् । म अफ्नो सुरले पढिरहेको थिएँ सोस्थिका त कति बेला निदाईसकिछिन्, मलाई पढ्न मान्न लागेन। उनको त्यो गुलाबी फेसेले मलाई भुतुक्कै पर्यो । म उनलाई नै हेरिरहें तर उनलाई छुन समेत सकिन मैले आफुले आफैंलाई बसमा लिन नै सकिन तेसैले तहाँ बाट उठेर म कौसीमा गएर बसें । करिब एक घण्टा जति कौसीमा बसेपछि म टिभि कोठामा आएँ ।
अनि एउटा औंलाले बिस्तारै उनको गिलो र कसिलो दुधको पोको छुन थालें, उनि त झन् पग्रेजस्तो लग्यो मलाई त्यसैले मैले मेरो देब्रे हातको पुरै औंलाहरुले उनको दुध सुम्सुम्याउन थालें । उनले ऊ...आ...अया...आया...ओ...ऑ...आई..ऊ...मम...उम्म...जस्ता आवाज निकाल्न थालिन्। अनि मेरो पालो मेरो दाहिने हात बिस्तारै उनको घोडामा राखें । देब्रे हातले एउटा दुध मोल्दै दाहिने हातले उनको साप्रा सुम्सुम्याउँदै उनको अनारी सम्म पुगें । उनि त झन् ठुलो स्वरमा ओओ...हूहो...मरे...आमा...मलाई...मार...आया...ई...ऊ...ए...ओ...ऑ...जस्ता आवाज निकाल्न थालिन् ।
एउटा हातले दुध मोल्दै अर्को हातले अनारी सुम्सुम्याउँदै बिस्तारै मैले उनको गतिमा किस गर्दै बिस्तारै कानमा अनि गालामा अनि फेरी बिस्तारै उनको मुखमा पुगें र मेरो मुखले उनको मुख टम्म थुनिदिएँ । त्यसपछि मैले मेरो दाहिने हात उनको पेन्टी भित्र छिराएँ । उनले धेरै पनि निकालिसकेकी रहेछिन्, जसलेगर्दा उनको पेन्टी पुरै भिजेको थियो । उनको त्यो भर्खर उम्रन खोजेका सेता खैरा रौँ, आहाहा...कति प्यारो र सुन्दर अनि मैले मेरो हात निकालेर पेन्टीबाहिर बाटनै सुम्सुम्याउन थालें । बिस्तारै फेरी भित्र छिराएँ र उनको पुतिमा औंलाले पुतिको ओरिपरी रगट्दै एउटा हातले दुध मोल्दै मुखमा किस गर्दै अर्को हातले उनको पुती चलाउन थालें । मैले अब दाहिने हातको चोर्नी औंला उनको पुती भित्र र बाहिर गर्न थालेको त उनि ऐया...उउउ...दुख्यो...ओं...य...स्स्स्स्स्स्स्स्स्स...उम्म्म्म्म्म्म्म ...छिटो...छिटो...पोल्यो... भन्दै कराउँदै चित्कार अफ्नो मुखबाट निकाल्दै थिन् । उनलाई सायद धेरै मजा आइरहेको थियो र उनि अफ्नो त्यो कसिलो पुक्क परेको Virgin पुतिमा छिटो लाडो घुसारेर सिल तोडोस् भन्ने चाहन्थिन् होला । त्यसैले मैले पनि ढिला नगरी बिस्तारै दाहिने हात उनको पुतिबाट झिकेर उनको स्कर्ट र टिसर्ट खोलिदिएँ अनि उनलाई किस गर्दै छिटोछिटो आफ्ना सबै कपडा खोलि नांगै भएँ र उनको पेन्टी पनि खोलिदिएँ ।
अब हामी दुवै जना जन्मजात नग्न भएका थियौं । दुवै हातले उनको दुध मोल्दै बिस्तारै मुखबाट किस गर्दै उनको त्यो कुवा सम्म पुगें र मजाले उनको त्यो कुवाको नुनिलो पनि खाना थालें ।उनि ओओ...हूहो...मरे...आमा...मलाई...मार...आया...ई...ऊ...ए...ओ...ऑ...जस्ता आवाज निकाल्दै थिन् । उनको मुखबाट अनयासै छिटो...plz…छिटो...अब...त...मारिदेउ मलाई...मेरो राजा...मेरो राजा...छिटो छिराउन...मा सहन सक्दिन...छिटो लडो कोचन...मेरो पुती च्यातिदेउन...सिल तोदिदेउन... plz ... plz... ऐया...उउउ...दुख्यो...ओं...य...स्स्स्स्स्स्स्स्स्स...उम्म्म्म्म्म्म्म ...छिटो...छिटो...पोल्यो... जस्ता सब्द निस्कदै थिए । मैले पनि मेरो लडो उनको पुतिको किनारमा दलें र बिस्तारै उनको पुतिको प्वालमा हालें तर तेत्रो पनि फ्याक्दा पनि मेरो लडो उनको त्यो कसिलो पुतिमा छिरें । त्यसैले मैले मज्जाले बल गरेर धक्क दिएको त स्वात्तै छिर्यो । उनले ऐया...मरेनी ममी...दुख्यो...पोल्यो...मरेनी...भन्दै चित्कार निकाल्दै रुन थालिन् । उनको पुतिको सिल च्यातियेकोले गर्दा उनको पुतिबाट खलल रगत बग्न थाल्यो ।
मैले मेरो लडो एकछिन नाचलाईकन उनको पुती भित्रै रखिरहें उनि रुन छाडे पछि बिस्तारै पुतिभित्र लडो चलाउन थालें । अनि बिस्तारै लादोलाई भित्र बाहिर गरौँ थालें । अब त उनलाई पनि दुख्न चदेचा क्यारे उनले पनि तलबाट बल लगाएर मलाई साथ दिन थालिन् । त्यसपछि मैले पनि फटाफट् लडो भित्र बाहिर गर्न थालें । उनि आहा...ओहो...हेहे...उहु..कति मजा आयो...अलि भित्र...छिटो छिटो...deep…deep…fuck me baby…kill me baby…hurt me…मेरो राजा...मलाई नछोड...अझ भित्र...म्म्म्म...ऊऊऊऊम्म्म्म...भन्दै एक्लै भट्भटाउँदै थिन् । यसरी करिब ३० मिनेट जति मच्चियपछि म सिथिल भएँ अनि उनि पनि । मैले मेरो लडो निकालेर उनको मुख भरि झरिदिएँ र मेरो लडो उनको मुखमा कोचिदिएँ । उनले मेरो लडोलाई लालीपप जसरि चुस्न थालिन् । अनि मैले मेरो लडोलाई उनकै मुखमा नै भित्र र बाहिर गरौँ थालें । फेरी मैले मेरो लडोलाई उनको पुतिभित्र घुसारेर दनादन दिन थालें । करिब ४५ मिनेट जति चिकेपाची म पुरै सिथिल भएँर उनीमाथि सुतें र उनि पनि सिथिल भएकी थिन् । यत्तिकैमा हामी दुवै जना निदायछौँ ।
Posted by sexjob at 12:28 PM9comments:
Posted by sexjob at 12:26 PM 13 comments:
Posted by sexjob at 12:26 PM 10 comments:
Posted by sexjob at 12:17 PM9comments: